HARARGEEN OROMIYAAF IJAA, DIINAAF HIJA – Kichuu
HomeNewsAfricaHARARGEEN OROMIYAAF IJAA, DIINAAF HIJA
Muummichi ministeeraa tokko aangoo dhimmoota danuu irratti muree murteessuu, aangoo waraana labsuu fi waraana labsame dhaabsisuus qaba. Kana malees dirqamni mootummaa tokkoo inni jalqabaa nagayaa fi tasgabbii eeguu fi lubbuu lammiilee biyyattii eegsisuu dha. Kanaaf, Dr. Abiy Ahmed hatattamaan ajjeechaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuun, warra hanga arr’aa yakka murruqii ummata Oromoo irratti raawwataa turanii fi jiran qawwee hiikkachiisee seeraaf dhiheeysuu dirqama qabaachuu beekee tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba.
Osoo lubbuun namaa qawwee waraana leenji’ee hidhateen ajjeefamaa jirtuu dhimma biraa haasa’uun fafaa fi qanyi, sablinaa fi tuffiidha. Guyyoota lamaan dhufan kana keessatti mootummaan tarkaanfii mul’ataa ummata keenya eewaluu fi nageenya waaraa uumuu danda’u hin fudhatu taanaan ykn murtii haqaa fudhachuu dadhabe taanaan ummanni Oromoo tarkaanfii itti aanuuf if qopheessuu qaba. Diina harka micciirree ofirraa dhoorkuu dandeenyuuf hogguu qanyifnee booyun fafa.
Ummanni osuma afaan qawwee diinaa ibidda itti tufuu, osoo xiyyaaraan gubbaa marsanii sodaachisuuf yaalanii waggaa afur wal jala aansee qabsoo gaggeesseen injifannoolee dhuma hin qabne akka gonfate eenyulleen dagachuu hin qabu. Barri aangoo sobaatiin Oromoo gabrummaa jala tursiisan dabree jira. Kanaaf, aanga’oonni amma filamanii arraata akka dammaa kan keessi summii kana Oromotti biifuu lakkisanii, dhugaa Oromoo jallisuu fi Oromoo amansiisuuf yaaluu dhiisanii diina ummata nagayaa fixaa jirutti achi dubbachuu qaban. Jechaan osoon taane gocha qabatamaan mirkaneessuu qaban. Kana tahuu baannaan yeroodhaan angoo kijibaa tana lakkisuun furmaata.
Aanoonni ollaa daangaa jiran marti wal qindeessuun, qawwee fi rasaasaan akkasuma humnaan waliif dirmachuun murruqii diinaa jalaa wal eewaluu qaban. Kana godhuu baannaan diinni akkuma duraanii bakka bakkaan adda addatti isin haleeluu akka itti fufu shakkiin hin jiru. Fakkeenyaaf, guyyoota itti aanan kanatti yoo isin waliif hin dirmanne naannoo daangaa kan akka Baabbilee, Gursum, Fadis fi Harargee lixaatti ammoo Mi’eessoo fi aanoota ollaatti liyyuu poolisiin akka weerara bantu shakkii hin qabaatinaa.
Kittilayyoon alagaa akka waan tokkummaa Oromoo isiin fiddeetti wayta namni dhimma miidhaa fi ajjeechaa Oromoo dubbatu tooftaa yartuu akka waan mirga ofii gaafachuun tokkummaa Oromoo diiguu taheetti xibaartu ilaalcha isii haleelaa gamtaa keenyaan qabsoo finiinsuun dirqama. Ummanni Oromoo qaama tokko irratti osoo if hin daganne irree isaa qofa abdatee qabsoo isaa asiin gahate ammaas of ittisuu fi diina ofirraa ittisuuf gamtaan qabsoo itti fufuutu isa baasa. Irreen gamtaatiin diina isaa ajjeessaa jiru of irraa gombisuuniis tokkummaa isaati.
Oromoon eenyuuf illee sobamuu hin qabu. Warri OPDO fi MM Dr. Abiy Ahmadiis haasawni afaanii fi gochi isaanii wal dhabaa jiraachuu kana hubatee jarri amma aangoo dubbachuu malee aangoo raawwachuu akka hin qabne baree hanga isaan aangoo muranii murteessuu horatanii Oromoon qabsoo isaa itti fufuu qaba. Diinni daangaa Oromoo tokko cabse diina daangaa Oromiyaa hunda abse akka tahetti hubachuun bahaaf dhihaa, kabaaf kibbaa, moggaaf giddugalaa sagaleen qeerroo Oromoo kan akka leencaa dirqama bookkisuu jalqabuu qaba. Oromoon irree isaa qofaan dhiiga isaa baafatee, imimmaan isaa qoorfata malee dirmachuu namaa eeggachuu hin qabu.
Wayyaaneen carraa humna siyaasaa qabsoo Oromootiin eega dhabdee amma immoo humna diinagdee horachuuf wixxifataa jiraachuu hubannee qabee fi qabeenya keenya kan saammachuuf wixxifatan kana agabsuun dirqama taha. Kanaaf, wayta ammaa jeneraaloonni wayyaanee Oromoo ija qabanii saammachuuf lola roga hundaan irratti banaa jiran. Afanfaajjii akkanaatiif osoo hin jilbiiffanne Oromoon keessaafuu Harargeen mudhii hidhatee, hidhii ciniinnatee liyyuu poolisii soomaalee fi wayyaanees firraa haleeluun qabeenya keessan eewalachuun dirqama tahuu hubadhaa.
OPDOn ergama wayyaanee fudhattee ummata Oromoo afaaniin sobaa filannoo itti aanuun gahuu qofaaf malee ummata Oromoof dhimmamtee akka hojjachaa hin jirre qabatama argaa jirru irraa hubachuun salphaa dha. Gaafaan waraanaa eegeen hooysuun if dagachiisuu malee ajjeechaa Oromoo hambisuu eega hin dandeenye maal gatii qaba? Gati qabeessi qabsoo tee qofa tahuu hubadhu yaa Oromoo. Kan ajjeechaa kee mormee furmaata waaraa siif hin finne kamuu wayyaanee wayyaaneen filamte tahuu hubachuun mirgaa fi haqa keetiif osoo hin dadhabne falmadhu.
Osoo lammiin biyya keessaa saniifuu sabni guddinaan hangafaa dhumaa jiruu kanneen dhumaatii akkanaa dheefa bahan biyyoota biraatti hidhaman barbaaduun fakkeessaa malee dhugaa tahuu hin danda’u. Osoo Oromoon dhumaa jiruu Xoophiyummaa faarsuu fi itti geeyraruun Oromoof gatii fi galiis hin qabu. Hoggaa Oromoon qabsoo isaa finiinsu malee Oromoon tole ja’ee cal’ifnaan fafa isa mudattu haaloota yeroo gargaraa arku irraa hubatee, cubbuu fi shira itti shiramaa jiru baree qabsoo isaa waliif tumsuun finiinsuu qofaatu murteessaa dha. Yeroo nuuf kennaan OPDO’n jattu ajjeechaa qofaaf malee eewaluuf akka hin taane Oromoon baree ofuma isaatiif if eewaluu qaba.
Jeneraaloonni wayyaanee fi aanga’oonni Abdi Illee kan Oromoo itti fixaa jiran daldala jimaa fi kotorobaandii daldaluuf akka tahe beekkamaa dha. Gaafa lolli daangaa finiinu Oromoon qalbii garas akka deebisu waan beekaniif wayyaanoonni daldala isaanii finiinsuuf haala mijjaawaa argatan. Kanaaf ummanni Harargee qabeenya keessan keessattuu Oomisha jimaa fi kuduraa gatii ol kaafachuun gurgurachuu ykn ammoo uggura gabaa haala isiniif mijjaa’uun gaggeessuun diinoota yeroo mara isin nyaachuuf ilkee qaratu kana agabsuu akka dandeessan hubadha. Bu’aa fi injifannoo lagannaa gabaa isinuu ni bektan waan taheef caalatti waaniin isinitti himu hin qabu.
Warreen ala jirtaniis tahee kan biyya keessaa haala danda’ee fi isiniif mijjaa’een warren daangaa irratti dhumaa jiruuf rasaasaaf qawwee gumaachaaf. Keessattuu warri diaspooraa diinagdee gumaachuun warren osoo onnee qabanii hanqina rasaasaa fi qawweetiin ganamuu dhumu kana deeggaruun dirqama. Hanga Oromoo fi Oromiyaan diina isii qoqoruu fi dhiiga Oromoo dhangalaasu kana injifattee bilisa taatuu sumuniin kiisha bobaa kaayyatanii fi sabbatatti guduunfatan gatii akka hin qabne hubachuun dirqama. Haala danda’amuun gareeniis tahee dhunfaan maallaqa rasaasaa fi qawwee warren lubbuu isaanii laatanii daangaa Oromiyaaf waardiyaa tahaa jiran kana deeggaruu dha.